Namboarina ho volon'ondry ranonorana polyurethane miloko marefo 100% misy paosy USD11.9-14
Ny palitao orana PU dia zava-dehibe amin'ny toetr'andro orana, manome fahombiazana ambony noho izany, fampiononana miavaka, faharetana voaporofo ary fiarovana lehibe indrindra. Malemy kokoa sy malefaka kokoa noho ny lamba akanjo rotsakorana hafa, polyurethane dia miovaova amin'ny toetr'andro mangatsiaka ary maivana kokoa ny lanjany.
Polyester adidy mavesatra be nopetahany takelaka orana PVC amidy USD4.5-5
• Ponco orana adidy mavesatra vita amin'ny polyester vita amin'ny polyester, 43 santimetatra ny halavany
• Tondra-drano tsy vita amin'ny rano, elektrika vita amin'ny herinaratra, bokotra vy
• Saron-tady azo esorina
• Size: M (salantsalany). Amidy amina loko tsy mitongilana (maintso, manga na mavo). Tongasoa ny fangatahana loko raha misy
Izy io dia vita amin'ny fitaovana avo lenta, mateza amin'ny fitafianao isan'andro! Fanomezana lehibe ho an'ny olon-tianao na anao io. Afaka mitana andraikitra fiarovana amin'ny fotoana tsy mahazatra. Azo ampiasaina mandritra ny taona amin'ny vanim-potoana orana Fitaovana PE milamina amin'ny tontolo iainana, matevina sy azo ampiasaina indray. Vanim-potoana: vanim-potoana rehetra Miralenta: Unisex Ampiasaina: Mety amin'ny fihazana ala, fijerena vorona, fitifirana vorona, fitifirana, fanjonoana ary hetsika hafa eny ivelany. Fampisehoana tsy tantera-drano tsara, effets camouflage miharihary ...
Akanjo farany sariitatra sariitatra PVC misy sarony. Miaraka amin'ny cuff elastika sy pirinty mahafatifaty, noho ny vidin'ny toekarena sy ny fanontana mahafatifaty. Tena malaza izy io.
Ity palitao orita PE ity dia mangarahara miaraka amin'ny tady fehiloha, lava tanany ary cuff elastika Izy io dia vita amin'ny fitaovana PE ary mety amin'ny dia an-kalamanjana.
Karazana: palitao akanjo an-kalamanjana: fitsangantsangana
Akanjo / pataloha tsy misy orana / Cape Cape: RAINWEAR
Fomban'ny Poncho: Akanjo orana tokana
Orana tsy azo sakanana tsy azo sakanana Unisex Rain Poncho USD5.2-USD8.3
Asa ivelany: TOUR Raincoat / pataloha tsy misy orana / Rain Cape: Fomban'ny RAINWEAR Poncho: akanjo volon'olon-tokana: moto / herinaratra elektronika lahy sy vavy: lehilahy, vehivavy, sokajin-taona: olon-dehibe Fitaovana: mifono polyester PU Toerana niavian'ny: Hebei, China Model Number: FB1049 Anaran'ny vokatra: Poncho Waterproof Color Color: Black Grey na amin'ny fangatahana Size: 130 * 100cm na hatevin'ny namboarina: 0.1mm lanjany: 300g Logo: Logo fanontana Logo MOQ: fonosana 1000 pcs: ...
Tendrombohitra Polyester Rain'ny curved miaraka amin'ny hood USD5.3-USD9.9
● Sasao amin'ny milina ● Fitaovana: fibre polyester 100%. Tontolo iainana, ampiasaina indray, madio haingana sy maina. ● Volavola: Haingo iray mifanaraka amin'ny ankabeazany, Vatana lava, zipper, voaroy, volon-doko maro loko, lamaody ary mora apetraka sy vonoina. ● Azo entina: Mavesatra maivana, latsaky ny iray kilao, fonosana sy entina mora foana. ● Fotoana: parka misy lohahevitra ivelany, fitsangantsanganana, bisikileta, fitsangantsanganana, filasiana, fety sns. Aza ajanona amin'ny orana sy rano ny fitafianao. ● habe: iray habe mifanaraka US S ka hatramin'ny XL; (Halavany: 36.2 ", Halavan'ny lamosina: 40.6", Bust: 57.5 ") Quick De ...
Ity ponco orana mahatsikaiky ity dia natao ho an'ny ankizy, manana endrika mahafinaritra sy loko marevaka izy, toa mahaliana sy mahafinaritra tokoa. Vita amin'ny PVC avo lenta izy io, ara-toekarena fa tsy tantera-drano, mateza ary mora entina. Mendrika ny mividy. Endri-javatra: vita amin'ny akora avo lenta PVC, marevaka amin'ny hoditra ary tsy mora zaraina, mitafy mahatohitra ary maharitra ampiasaina. Maivana sy mora entina, azo aforitra kely. Sariitatra sariitatra mahafatifaty miaraka amin'ny loko mamirapiratra, ataovy mahafinaritra ny zanakao. Anaran'ny vokatra ...
maodely No. anarana LD-HC16: kitapo mpiaro orana: TPU PVC EVA Polyester habe: Vatana: 45 * 32 sm na hatevin'ny namboarina: lanja 0.02-0.25mm: 30g loko: mavo / mangarahara / maitso / manga / mavokely / fotsy na namboarina afaka pirinty logo na modely fonosana: 1pc / polybag; 100 pcs / baoritra afaka fonosana toy ny fangatahan'ny mpanjifa. endri-javatra: tantera-drano, ety ivelany, lamaody 1.Ny akanjo palitaon'angatra miaro ny tanety lavitra ny orana sy ny vovoka.
Fanontam-pirinty feno palitao tantera-drano polyester malefaka USD3.9-USD10
Akanjo palitao tsara tantera-drano no hiaro anao amin'ny orana sy ny rivotra, fa ho maivana ihany koa izy io ka tsy hafanana be amin'ny toetr'andro mafana. Mahazo aina ny mitafy sy mijery tsara koa.
Pvc Poncho, Pvc Raincoat, Vehivavy palitao orana, Ankizy Pu Raincoat, Akanjo Peva, Pu Raincoat,